Maqaalka Breena Fain ee Martech Zone |
Maqaallada by Breena Fain
Breena Fain waa Khabiirka PR & Suuqgeynta ee Formstack, oo ah dhisme foomka khadka tooska ah ka sameysmay kaas oo horseed u noqday sameynta, maamulida, iyo martigelinta foomamka internetka. Foomka 'Formstack' wuxuu siiyaa ganacsiyada noocyadooda iyo cabirradaba qalab dhisme qaab fudud oo si fudud loo isticmaali karo si ay si fudud ugu ururiyaan una maareeyaan xogta. Isticmaalayaasha waxay si toos ah ugu dhex dhejin karaan foomam boggooda si loogu soo qabto hoggaanka degdegga ah Noocani wuxuu awood u siinayaa ururada, gaar ahaan ganacsiyada yar yar, inay fududeeyaan meertada suuqgeynta iyagoo ballaarinaya kheyraadkooda.
Talaado, July 17, 2012 Talaado, July 17, 2012 Breena Fain
Shirkadaha badankood waxay u fiirsadaan dhaqankooda baaxad weyn, iyagoo daboolaya dhamaan hay'ada. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in lagu dabaqo dhaqanka la qeexay ee ururkaaga dhammaan howlaha gudaha, oo ay ku jiraan kooxdaada suuqgeynta. Kaliya maahan inay iswaafajiso istiraatiijiyaddaada yoolalka guud ee shirkaddaada, laakiin waxay dejineysaa heer waaxaha kale ay ku daydaan. Waa kuwan dhawr dariiqo oo istiraatiijiyadda suuqgeyntaadu ay uga tarjumeyso dhaqanka guud ee ururkaaga: 1. Magacaabo hoggaamiye dhaqameed.